Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » FAA Mamoaka Boeing Vaovao 737 MAX Fampitandremana
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fiaramanidina voakasik'izany dia ahiahiana fa tsy voafehin'ny fikajiana elektronika ny fonosana famoahana rivotra izay mamoaka rivotra any amin'ny fitoeran'entana avy amin'ny faritra hafa ao amin'ny fiaramanidina.
Ny fampitandremana dia navoaka momba ny olana mety hisakanana ny afo ao amin'ny Boeing 737 MAX.
Ny fiaramanidina Boeing 737 MAX ary maodely 737 hafa dia voakasiky ny toromarika momba ny fiarovana.
Misy fiantraikany amin'ny fiaramanidina 2,204 manerantany ny baiko.
Ireo olana dia toa tsy nifarana tamin'ny Boeing 737 MAX sahirana. Raha i Etazonia kosa Fitondrana federaly federaly (FAA) nivadika ny filaharana tany am-boalohany rehetra grounding Boeing 737 MAX fiaramanidina tamin'ny Novambra, mihoatra ny 100 ny fiaramanidina toa voaozona no niorina indray tamin'ny volana aprily noho ny olana eo amin'ny rafitra herinaratra. Ny maodely vaovaon'i Boeing, ny 737 MAX 10, dia niainga voalohany tamin'ny volana Jona ary antenaina hiditra amin'ny serivisy amin'ny 2023.
Saingy tao anaty baiko vaovao, navoaka androany, ny FAA dia nametra ny fahafahan'ny fiaramanidina Boeing 737 Max & NG hitaterana lelafo, manamarika fa ny fiaramanidina dia mety manana olana amin'ny fifehezana ny onjam-peo miditra sy mivoaka ny fitoeran'ny entana.
Ny fiaramanidina Boeing 737 Max sy maodely 737 hafa dia voakasiky ny toromarika momba ny fiarovana, izay mitaky ny mpandraharaha hanamarina fa ny zavatra rehetra ao anaty fitoeran'ny entana dia tsy mety may sy tsy mety may. Ny fiaramanidina voakasik'izany dia ahiahiana fa manana "fifehezana elektrika tsy mahomby ny fonosana famoahana rivotra izay mamoaka rivotra any amin'ny fitoeran'ny entana avy amin'ny faritra hafa ao amin'ny fiaramanidina," hoy ny FAA.
Misy fiantraikany amin'ny fiaramanidina 2,204 manerantany ny baiko, 663 amin'ireo no voasoratra anarana any Etazonia. Ny maodely 737 Max an'ny Boeing dia natsangana hatramin'ny volana martsa 2019 taorian'ny fianjerana roa nahafaty olona 346 tao anaty sambo ary nanambara olana iray tamin'ny rafitry ny solosaina. Ny famotopotorana bebe kokoa dia vao mainka nahitana olana ara-piarovana bebe kokoa, fa tsy tamin'ny maodely 737 ihany.
Ny 777 sy ny 787 an'i Boeing dia efa nodinihina ihany koa noho ny lesoka azo antoka. Ny orinasa mihitsy no nanentana ireo mpitatitra fiaramanidina hampiato ny sidina misy modely 777 tamin'ny volana febrily taorian'ny môtô marobe nipoaka teny afovoan-tany, ary tamin'io volana io ihany, ny FAA dia nitaky ny fizahana 222 Boeing 787 momba ny ahiahy momba ny tontolon'ny famonoana. Ny ahiahy momba ny fako momba ny “potipoti-javatra avy any ivelany” tavela ao anaty fiaramanidina vaovao dia nanjary nodinihina bebe kokoa.
Ady fiarovana olona any Myanmar: ny ofisialy ...
Manampy ny ekipa mpanatanteraka azy ny Security Trail
Ny filohan'ny birao afrikana fizahan-tany dia manaparitaka hafatra momba ny fanantenana ao ...
Glass Lewis dia miara-miasa amin'ny Arabesque hanatsarana ny...
Ny fahafatesan'ny COVID-10 any Rosia tamin'ny volana septambra dia avo roa heny noho ny…
Ny tavanao no karapanondro vaovao ho an'ny Travel: Tsy maninona ny biometrika!
Kisoa Vegetarian vs Tena kisoa: Fiompiana kisoa vaovao...
Ny Seven Knights 2 vaovao dia natomboka maneran-tany miaraka amin'ny Free-to...
Alemaina: Roa taona an-tranomaizina noho ny vaksiny COVID-19 sandoka…
Nandefa miaramila tany amin'ny Nosy Solomon i Aostralia taorian'ny...
Ekipa mpitarika vaovao nambaran'ny Aprecia
Oselavir Fanafody Antiviral Vaovao Mandeha any Shina
Delta dia nanambara ny TSA Precheck lobby vaovao, kitapo ...
Manao fihazakazahana ho an'ny fahasalamana ireo mpanatrika IMEX America
Ny fikorontanan'ny fitsangatsanganana any ivelany dia omena tsiny amin'ny politikan'ny governemanta
Ny Middle East Airlines dia lasa Airbus Skywise Health...
Mandray ny serivisy vaovao avy amin'ny American Airlines i Jamaika
Nandresy 3 tsara indrindra izao ny Authority Tourism Malta Amerika Avaratra...
Macau GT Cup tohanan'ny Sands China Title